Zvikonzero zvekushandisa Linux kuvandudza | Linux Vakapindwa muropa
Windows 10 Yatora kukwakuka kukuru uye yafarira vashandisi uye zvakare nyanzvi dzinoishandisa, ndinoreva vavaki. Mamwe maMicrosoft masystem aisada zvakanyanya, asi Windows 10 iri kuyedza kushandura izvi uye yaita kuti zviomere makwikwi nema Linux subsystem ayo anosanganisa Ubuntu pakati pemamwe ma distros uye aunogona kurodha pasi kubva kuApp Store yepuratifomu iyi, inowanikwawo paiyo Server vhezheni, iyo inokwezva vazhinji vanogadzira vanofarira Linux kushandisa ino sisitimu.
Nekudaro, Linux zvakare ine chirevo maererano nekushandisa kwayo se chikuva chekuvandudza software uye ine zvimwe zvinokwezva zvinogona kuchengetedza vanogadzira. Zviripachena kutaura uye kuenzanisa nemazwi akaenzana, zvinotora kubatana kweimwe software huru iyo inoramba kutakura kana kuburitsa software yekuvandudza yeLinux senge iripo yeWindows uye dzimwe nguva zvakare yeMac. Kunyange ndichifanira kutaura kuti Linux zvakare ine maturusi akanaka kwazvo ...
Saka chii chingave chikuru dhizaini kune vanogadzira kuti vagare papenguin chikuva uye varege kuenda kuMac kana Windows? Zvakanaka, hapana yakapusa uye yakajeka mhinduro kune izvi, asi mamwe e zvinoonekwa zvakanaka zveLinux Ndizvo:
Ndezvemahara: kuve wakasununguka uye wakasununguka unogona kuva nerusununguko uye kushanduka paunenge uchichengetedza marezinesi, kana uchida zvikwata zvakawanda zvekuvandudza, studio yekuvandudza kana kambani inonyatso kukoshesa
Zviri nyoreKunyangwe zvinofungwa nevazhinji, hazvisi izvo zvakaoma kuzvibata nekuzvibata, uye unogona kushandisa madhiraivha eUSB kuti iitakurike uye kuti ugone kuitora chero kwaunoda.
Resources: Kana iwe uchida kukwidziridza ese masisitimu mashandiro ekuunganidza kana ako ekuvandudza maturusi, muLinux iwe unogona kuita pasina graphical nharaunda.
Uye zvirokwazvo uchawana zvimwe zvakawanda ... handiti?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Zvikonzero zvekushandisa Linux kuvandudza
Ndeipi GNU / Linux distro yaunokurudzira kushandisa kugadzira software?
Pindura kuna njr810
Chimwe chikonzero ndechekuti Valgrind, chishandiso chakasimba chekugadzirisa dambudziko, inogona kushandiswa. Inowanikwa kuLinux uye macOS, zvisinei paMac haina mashandiro ayo ese anowanikwa nekuti kernel yayo haisi yakavhurika sosi.
Kana iwe uchida kuronga muC ++, une Qt Musiki inowanikwa, iri multiplatform (ine Open Source vhezheni) uye yayo kodhi mhariri yakakwana kwazvo.
njr810, chero distro yakanaka ... mubvunzo uyu uri pamusoro pekuwanda kwesimba raunoda kuisa mari, kana iwe uri mutsva ndingakurudzira Mint pamusoro peUbuntu nekuti izvi neMATE kana Cinammon desktop nharaunda yakareruka kupfuura Ubuntu, kuwedzera kune kuve wakatsiga kare kunze uko iwe unofanirwa kuverenga zvishoma izvo mamwe ma distros anokupa iwe saDebian, Fedora, OpenSuse, Slackware, Arch kana seni mune yangu Gentoo kuti ndakazvisarudzira iyo nhanho yekugadzirisa uye optimization yainopa.
Pindura kuna jgarciar
Kwete, saka, zvikonzero zvikuru sei….